Kedu ihe ịnyịnya ígwè ụgbọ mmiri dị mma maka? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Beach cruiser igwe kwụ otu ebe - ịchọta ihe ngwọta
Kedu ihe ịnyịnya ígwè ụgbọ mmiri dị mma maka?
Isergbọ igwe ugboaladị mma maka ịnya ụgbọ ala na njem njem ụzọ ụfọdụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkụ nzọ ụkwụ ala nke mba, augbo aghabụ ihe ka mmaigwe kwụ otu ebemaka ọrụ karịa aosimiri ugbo mmiri. Anyị na-akwado ha maka ịgba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ dị ala, ụzọ ịgba ala abụọ dị larịị ma zọpụ yaigwe kwụ otu ebeụzọ.Ọnwa iri 31, 2016
oh yeah ndewo taa anyi nile bu beep anyi biara na walmart mu na Lucas na Marc Dyckman na anyi gha azuta ugbe ugbo ala n’ebe ahu igwe gbara oke onu anyi ga ahu ihe anyi nwere ike ime ha na nwoke a igwe kwụ otu ebe nke kachasị dị ogologo ga-emeri $ 100 site na ego nke Lucas, yabụ ka anyị banye ebe ahụ, anyị mere ya na mpaghara igwe kwụ otu ebe ebe a na Walmart enwere sloes ịhọrọ nke ga-aga nke dị iche na ụgbọ mmiri na m ' A hụrụ naanị $ 118 $ 118 zuru ọchị Na ụmụ okorobịa ndị ọzọ kedu ihe ị ga-enweta ọfụma anyị na-eme ndị na-akwọ ụgbọ mmiri taa iji hụ oke mmegbu ha nwere ike ịtachi obi na ọ nwere njide ego zuru oke Ọ bụrụ na ụkwụ ahụ ejiri anyị nwee ike weghachite ya bụ na nnukwu ájá dunes n'akụkụ okporo ụzọ, anyị ga-ewere ya na gị Freeriding our cruiser anyị, ma e nwere ndị Kidson ahụ na-agbapụ na o wee sị, M nwere ike ime ya na mbụ, M ga-ewere ha ala rfen na dobe inyeahalright, ka anyị gbaa igwe kwụ otu ebe na ị dị njikere maka ya Lucas mụ na Lucas nọ n’elu ugbu a ka anyị lekọta ọnụ ebe ọ bụ asọmpi ition akpata igwe kwụ otu ebe na dịruru ndị fọdụrụ n'ezinụlọ bụ eto eto ma ọ bụrụ na ị dị njikere m ga-now n'ezie na-eme ya ọzọ ya anya zuru okè dum bike ọbọhọ mbụ ịma aka otú ọ bụ ekweghị ekwe ọ bụ a ọtụtụ fun kasị mma ụbọchị everokay esote ihe ịma aka n'ihi na ọgba tum tum bụ gafere n'oche a ebe a m na-egosi ụmụ okorobịa ka esi eme ya ugbu a na-eme ka ọ ka mma na ọnọdụ a ugbua ọfụma gị na-atụgharị-akara yookay na-agagharị gị oh yeaheasy yeah niile nke wiil anyị ka na-atụgharị wiil ndị ahụ ka na-arụ ọrụ anyị ga-eme ugbu a steepụ nke mbibi nke ga-anwale wiilị na ịtọ oke Nke ahụ ọdịiche dị ukwuu Ọdịiche ahụ buru nnukwu ibu Luke mma uh ụmụ okorobịa, m ga-ejide ego m ka ọ ka na-apụta mgbe e mechara mgbawa anyị bụ akwa Egbupụrụ ntakịrị anyị hụrụ mpaghara anyị nwere ike imebisi ma banye nwayọ nwayọ ị dị njikere maka ya ee coold ị bụ onye mbụ n'ime gị naanị m mere wheelie wee kewaa ego ahụ oh mba oh no look that it was i enweghị ike ịgbawa enweghị ego maka na ọ na adị nzuzu oh my god check out this gi Ndanda-obere onye nyocha nnọkọ nwere ihe ọzọ, ọ dị ka hangout akara, ọ bụ ihe nkiri, yabụ enwere mgbidi dị warara ebe a ma kpoo onwe gị tupu anyị emee mgbidi iji mee 180 ma ọ gbaghaa uche ya dị njọ ma ọ ka nwere ike ide ya yabụ na ị pụọghị n'egwuregwu ahụ mana n'ihi na ụlọ mmanya m nwere ike ịgbaji ma ọ bụrụ na m nwaa Wallrideyes bọọlụ m agagharịla ọzọ, yabụ oh godlet m na-enweta ihe ịrịba ama iji mee ya, ị chere na ọ ga-apụ, ọ bụ ya? ọ na-eri 20 pound m karịa anyị niile na-eso ya, ọ dị ka gimbal, ọ dị mma, jiri ụkwụ gbagọrọ agbagọ nke dị na sketchy, lee ka wiil ahụ gbagọrọ agbagọ ka na-arụ ọrụ, n'agbanyeghị na ọ nwere ike zuru oke maka steepụ setịpụrụ m dị nnọọ hụrụ a steepụ si a ụfọdụ mbadamba formark n'ihi na ọ na-aga apịaji ya wheel, dude, ọ ga-abụ The Epic, anyị ịrị elu na-eme ya ozugbo chi m anya na m Ogwe, ha dị nnọọ ala anyị na-alaghachi mgbe gbagoo wee dị ka na abuo abụọ na-aga otu Oh, olee nke gbadara OhOhoh, nke ahụ pụtara sketchy dị nsọ mkpara m anaghị esighi ike na ha na-agagharị, mana achọtara m usoro ikpe a na-echere ka ọ gbapụ? Ogwe anyị erutela na njedebe ikpeazụ Anyanwụ na-ada anyị enweghị oge buru ibu ma Lukas chọrọ ịda n'ụgbọ okporo ígwè ahụ larịị, anaghị m ekwe ka Ogwe m mee ka m kwụsị ndụ m Mark kedu ihe ị chere na echere m na azụ ụwa m agbajiri nke mere na ọ bụghị n'aka m nke ahụ abụghị site na m wee kaa ma ọ bụrụ na lucas ọ bụrụ na ị rute na nke m na isi n'aka anyị mgbe ahụ ị ga - enweta $ 100 m na - ewe iwe nke ukwuu na m chọrọ iji merie ihe ahụ esighi ike gbajie, ogwe a na-aga oh oh, then do it Lucas this is the win, nke ahu bu nzuzu, nwoke oh chi m, i nwere ezigbo nguzozi, o bu ihe siri ike, oh chim, furu m 100 taa oh ee anyị na - eme mgbe ị na - agba ọsọ oge ọ bụla ị na - echekwa oche gị niile ma kwụpụ Ọ dị mma anyị tụgharịrị ịnyịnya ígwè Lucas, lee nnukwu egwu ahụ nke fọrọ nke nta ka ọ nwụọ, nke ahụ bụ nzuzu, yabụ na ọ dịghị onye n'ime anyị meriri, ọ dịghị onye n'ime anyị $ 100 na anyị ga-eme ihe ịma aka ọzọ mgbe anyị laghachiri na Europe n'oge ụfọdụ n'afọ ahụ nke ahụ bụ njedebe nke isiokwu ahụ na ị nwere obi ụtọ na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị gaa Otu onye ga-ahapụ ihe ole na ole mgbe anyị debanyere aha
Kedu ụdị ụgbọ ịnyịnya ụgbọ mmiri kachasị mma?
Best osimiri cruiser bike ụdị
Ngwongwo ụgbọ mmiri osimiri dị mma maka mgbatị ahụ?
Iji nweta ọtụtụ ihe na fechaaosimiri ugbo mmiri, ọ dị mma ịnya kwa ụbọchị, ọbụlagodi na ọ bụ naanị nkeji ole na ole kwa ụbọchị. Ọbụghị naanị na ị ga-enweta ahụ zuru okerụpụta, ma ị na-eme ka uru ahụ́ gị sikwuo ike, na-emekwu mgbanwe, na-alụ ọgụ ike ọgwụgwụ, ma na-ebelata ikike iche echiche. Pụta ma dabara na aosimiri igwe kwụ otu ebe.Abụọ 16, 2017
Hey ụmụ okorobịa! Site n'àgwà nke igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe, ọgba tum tum bụ ihe kachasị mma na ụwa abụọ. N'ihi na ha na-egbo mkpa nke ọnọdụ ịnya ịnyịnya, enwere ike iji igwe kwụ otu ebe na-agagharị n'obodo ma ọ bụ dozie ụzọ ụfọdụ na-adịghị mma. n'isiokwu a Anyị kere ndepụta a dabere n'echiche nke aka anyị, nyocha, na nyocha ndị ahịa.
Anyị atụlewo ogo ha, njirimara ha na ụkpụrụ ha n'ịbelata nhọrọ kachasị mma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ozi ma melite Ọ bụrụ na ịchọrọ ọnụahịa na ngwaahịa ndị a kpọtụrụ aha, jide n'aka na ịlele njikọ dị na igbe nkọwa dị n'okpuru. Lee ndị kacha mma ise anyịnya igwe kacha mma.
Ise ngwaahịa na anyị ndepụta bụ Schwinn GTX. Schwinn GTX bụ ngwakọ ngwakọ nke dị n'okporo ụzọ dị iche iche. Ọ nwere ụdị egwuregwu egwuregwu aluminom ma dị na ụdị 3 dị iche iche n'ụzọ nkịtị, ya bụ GTX1.0, GTX 2.0 na GTX Elite.Th igwe alumini a nke alloy siri ike iji mee ihe n'oge ọ bụla. Schwinn mere igwe kwụ otu ebe a na njikwa nzaghachi. Ọ nwere taya na-adịgide adịgide, nna ukwu ahụ ọbụlagodi ntakịrị pere mpe na ụzọ ụkwụ Schwinn GTX dịkwa njikere yana sistemụ nkwusioru n'ihu ndụdụ nke na-amịpụta bumps ma hụ na ọ na-aga nke ọma.
Schwinn GTX na-enye ezigbo igodo, ma ọ bụ maka njem ma ọ bụ naanị n'okporo ụzọ. O nwere taya nwere otutu 700c nke nwere okpukpu abuo nke nkpuru ala - iji uzo di nma. Ejiri Schwinn GTX kwadebe ya na breeki kwụ ọtọ ma nwee nkwusioru siri ike.
ụmụ nwanyị dị ime nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè
Ọ nwere n'ibu diski brek n'ihu na azụ. O nwekwara 21-ọsọ Shimano na-ebute mgbanwe na Shimano azụ derailleur. Uru ya bụ: * Ọ nwere ike ịga ala ọ bụla ọ bụrụhaala na ọ bụghị oke; * Ọ dị mma maka ịkwagharị na egwuregwu; na * Ọ dị mfe karịa igwe kwụ otu ebe.
Kaosinadị, ọghọm ndị a bụ: * Oche ahụ nwere ike ghara iru ala mgbe njem dị ogologo gachara; na * Ebughi ya maka iji ụzọ dị oke egwu. Ọ bụrụ na ị na-achọ igwe kwụ otu ebe nke na-enye ọsọ na agility na ego ọnụ, Schwinn GTX zuru oke maka gị. Ngwaahịa nke anọ dị na ndepụta anyị bụ Schwinn Network.
The Schwinn Network bụ igwe kwụ otu ebe zuru oke maka njem dị ogologo gburugburu gị. N'agbanyeghị obere ịdị arọ ya, igwe kwụ otu ebe a siri ike iji ruo ndị ọ toro ogologo. Ma ị na-aga ọrụ ma ọ bụ na-agba ịnyịnya maka ihe omume ntụrụndụ, igwe kwụ otu ebe a na-enye njem dị mfe, nke dị mma ma dịkwa mma.
Igwe kwụ otu ebe a nwere Shimano EZ Fire shifter wuru na-ọsọ 21 nke emeziri maka ịhazigharị ọsọ ọsọ na ngwangwa zuru oke. Ezubere ya iji nye nnukwu ahụmịhe ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ awara awara, ụzọ ụkwụ na-agba agba na ọbụna obere ugwu, etiti ahụ, akwa rim na eriri brek bụ nke aluminom. Ọdịdị ya dịgasị iche iche na-eme ka ndị ọkwọ ụgbọala jiri ya na-akwọ ya n'ụzọ dị mfe, na-enye ha ngagharị na agagharị.
Ejiri netwọ 700win Schwinn Network wee gụnye Shimano 21-Speed ​​Revo TwistShifter na Shimano azụ derailleur. Ọ na-abịa na ndụdụ nkwusioru maka njem dị larịị. Uru ya bụ: * Ya stem is kemeghi.
O nwere ike ịnabata ndị nọ n’elu ugwu dị iche iche; * Ọ na-eme ka ịrị ugwu dị mfe; na * Ọ dị mfe karịa igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ. Ọghọm: Otú ọ dị, eriri igwe nwere ike ịgbanye n'ụgbọala ụgbọ ala; na * Ọ gaghị enwe ike ịnya oke ụzọ. Na Schwinn Network ị nwere ike ịnụ ụtọ njem dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma.
Ọ bụ ezigbo ngwakọ igwe kwụ otu ebe maka agbata obi, n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụ na ụtụtụ na-aga njem. Ngwaahịa nke atọ na ndepụta anyị bụ nke isii reezero Pave n 'Trail. The Pave n 'Trail na-enye arụmọrụ na ntụgharị.
Igwe kwụ otu ebe a na - enye ọfụma ọfụma n’ihi na ọ na - abịa na Vibrazord Front Suspension tuning fork na 1.75 inch nke nwere mgbochi mgbochi na - eji eriri siri ike. Ọ dị na nsụgharị 3: Network 1.5, Network 2 na Network 3.0.
Ma oge ezumike ma ọ bụ oge ezumike, igwe kwụ otu ebe a na - enye gị ohere ịnya nwayọ ma kwụsie ike. O zuru ezu site na ngwa ngwa 7-ọsọ na ngwa ngwa ngwa ngwa maka ngwa ngwa na ngwa ngwa. The Pave n 'Trail nwere Vibrazorb n'ihu fọk ahụ nke na-ebelata mkpọtụ na ịtụnanya n'okirikiri ala.
Okpokoro taya ya nke anụ ọhịa ahụ dị sentimita 1.75 na-agbagharị nke ọma na ngwa ngwa na pavment ahụ, ebe ụkwụ ya siri ike na-amịpụ ọkọ site na unyi n'ụzọ. Ejikwa ngwongwo ngwakọ a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ 21 Shimano.
Uru ya bu: * O di nma maka iji ubochi nile dika ije na ije ozi; * Ọ nwere ike ịnabata akpa aka ya maka akpa akpa ya; na * Ọ dị mfe. Uzo adighi nma bu: * Enwere ike iwere taya ya ka obosara; na * Akuku ya ime nwere ike mebie mgbe ụfọdụ. The Sixthreezero Pave n 'Trail dị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ igwe kwụ ọtọ nke ị nwere ike ịnya ịrụ ọrụ, na-agba ọsọ, na ọbụlagodi ụzọ ụzọ.
Ngwaahịa nke abụọ na ndepụta anyị bụ Schwinn Discover. A na-eme Schwinn Discover maka ịgagharị site na mbara ala dị iche iche. Ọ na-abịa na aluminom etiti na usoro aluminom na-agbanwe.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị igwe kwụ otu ebe, igwe ngwakọ a na-egosi na ọ siri ike ma kwụsie ike, na-enwe ike ịrụ ọrụ dị iche iche na ihu ya. Igwe kwụ otu ebe a na - enye ọdịiche ọsọ ọsọ 21, na - eme ya igwe agile nke ị nwere ike iji n’okporo ámá obodo na-ekwo ekwo, ọdịdị ala, ma ọ bụ mbara ala siri ike. Achọpụtara Schwinn Discover na ndụdụ nwere nkwusioru nke nwere ike ijikwa isi na ala okwute.
Enweghị ikike ịkwọ ụgbọala achọrọ mgbe ị na-agba ịnyịnya ngwakọ a n'ihi na ọ dị mfe ịmegharị. Ọ nwere 21-ọsọ SRAM adịgide mgbanwe lever, ihe alloy ighikota adịgide shifter na a Shimano azụ derailleur d gearbox ụgbọelu. Uru ya bụ: * Fenders ya na-echekwa onye ọkwọ ụgbọ ala pụọ ​​na unyi na ọkọ; * Ọ na-enye ọtụtụ nsụgharị; * Ya mgbaka azuokokoosisi nwere ike ịnabata agba nke nha niile; na * Ọ nwere ike iburu ihe.
Agbanyeghị, igwe kwụ otu ebe a dị oke arọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ igwe kwụ otu ebe nke nwere ike izute ihe dị iche iche na-esiri ike, Schwinn Discover bụ igwe kwụ otu ebe ị nwere ike ịdabere na ya. Tupu anyị enye nọmba ahụ, gụọ nkọwa dị n'okpuru maka azụmahịa kachasị ọhụrụ na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a, ma jide n'aka na ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgidesi ike na ngwaahịa kachasị mma n'ebe ahụ.
Ka emechara, anyị n'elu ngwakọ bike bụ Sixthreezero EVRYjourney. Na ileba anya mbu, nke isii a bụ EVRYjourney dị ka igwe kwụ otu ebe, mana ka anyị leruo ya anya, ọ bụ ngwakọ ngwakọ a kwadebere ya na igwe elegharị anya nke 250 watt. Ọ na-enyere ụzọ abụọ aka: enyemaka ụkwụ na ọkụ eletrik zuru oke.
Na okporo ụzọ ahụ, igwe kwụ otu ebe nwere ike iru ọsọ ruo 24 km / h zuru oke eletrik. Site n'enyemaka pedal, ọ nwere ike iru 48 km / h, nke pụtara na a na-arụ ọrụ moto ahụ ka ọ na-aga. Na oche azụ ị ga-ahụ batrị elekere 250 watt ezubere iji gbaa b Ruo kilomita 15 na ụgwọ zuru ezu.
Design-maara ihe, na EVRYjourney bụ ihe magburu onwe igwe kwụ otu ebe maka ukporo agafe. Ọ bụ ngwakọta nke ngwakọ na osimiri ụgbọ mmiri nwere otu ntụsara ahụ dị jụụ, nke dị jụụ nke na-etinye ahụ gị n'ọnọdụ kwụ ọtọ. A kwụrụ igwe kwụ otu ebe a na-eji aluminom arụ ọrụ nke nwere anụ ọhịa 1.95 n'obosara, taya dị larịị.
Mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè ahụ na-enye ọnụọgụ dị iche iche site na 1-ọsọ, 3-ọsọ, 7-ọsọ na ruo 21-ọsọ maka ọdịiche dị iche iche dị iche iche, ọ nwere ike ị nweta gị ebe ị na-aga na ọsọ na-adịghị oke ọsọ ma ọ bụ nwayọ nwayọ, mana nwere ikike ziri ezi ka ịnụ ụtọ ịgba ọsọ. Ejiri ngwongwo ngwakọ EVRYjourney nwere 26 x 2 nke anụ ọhịa whitewall nke nwere ike ịnweta. O nwere 7-ọsọ Shimano Tourney n'azụ derailleur na 7-ọsọ Shimano Index Revo Shifter.
N'otu oge ahụ, a kwadebere ya na brek na n'ihu na brek yana akpa akwa na mudguards. Uru ya bu: * O nwere otutu uzo: nhọrọ; * O nwere fendụ iji gbochie unyi na ọkọ; na * Enwere ike iji ya maka njem, agbanyeghị, ọ kaghị mma maka iji ụzọ na-aga n'okporo ụzọ, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ igwe kwụ otu ebe nke dị mma maka njem kwa ụbọchị ma ọ bụ ịnyịnya nkịtị na ịnwere ike ijikwa ụzọ ole na ole siri ike, mgbe ahụ sixtyreezero EVRYjourney ngwakọ e-bike bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma n'ebe ahụ. Na nke ahụ bụ ihe niile maka anyị ise kasị mma ngwakọ anyịnya igwe na ahịa.
Hụ nkọwa dị n'okpuru maka njikọ maka ozi zuru ezu na ngwaahịa ọ bụla. Chetakwa ịhapụ okwu ka anyị mara. Nke ahụ bụ ya maka ugbu a.
Daalụ maka ikiri! Ọ bụrụ na anyị enyerela gị aka n'ụzọ ọ bụla biko pịa bọtịnụ 'Dị ka' na 'Idenye aha'. Lee gị n'isiokwu ndị na-esonụ!
Kedu ihe bụ igwe ụgbọ mmiri Schwinn?
Crugba ígwè Cruiser:
Ndị a ochie-achọanyịnya igwenwee obosara balloon sara mbara, oche ndị sara mbara, ma debe gị n ’oche kwụ ọtọ. Ndụ nke augbo aghaonye na-agba igwe: Dị ka kpochapụwoSchwinnNdabere-Ray, augbo aghabụ oké nhọrọ maka ukporo na nkecha cyclist onye na-achọ a ufọk ufeneigwe kwụ otu ebe.
Schwinn ma ọ bụ Huffy igwe kwụ otu ebe ka mma?
Ha abụọHuffynaSchwinnnwere uru ha. N'ozuzu,Huffydị nnọọ ọnụ karịaSchwinn, na-eme ika ammanhọrọ maka ukporo biker. Otú ọ dị,Schwinndị elu karịa na mma, na-eme ka ọ bụrụmmanhọrọ maka ọkachamara ma ọ bụ ịnyịnya ígwè na-anụ ọkụ n'obi.Ọnwa Atọ 15, 2021
Nwere ike ịkwụsị ibu n’ịnyịnya igwe ugbo mmiri?
Naanị ọkara elekere nke ịgba ịnyịnya ígwènwere ikeEnyemakagịgbaa ọtụtụ narị calorie ọkụ, dabere na ogo mbọ gị.I nwere ike imena n'ụtụtụ ma ọ bụ mgbede tupu ma ọ bụ mgbe arụchara ọrụ, ma ọ bụị nwere ike ịgba ígwèkameeụfọdụ ozi. Ọ bụghị naanị uchegịọkụ calories na-arụ ọrụ gị ahu, magịAga m echekwa na gas.Ọnwa iri 20, 2016
Gịnị kpatara igwe kwụ otu ebe na dị oke ọnụ?
Gịnị mere ụgbọ mmiri ugbo elu ji dị oke ọnụ?Isergbọala ụgbọ mmirindididị oke ọnụn'oge gara aga na-eme ka ewu ewu ha na nnukwu ọchịchọ. Ọchịchọ a na-arịwanye elu emeela ka ọnụ ahịa dị elu, mana ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya amalitela iweda ọnụ ahịa nkeugbo agha ugboala.
Enwere m ike ịkwụsị ibu n’ịnyịnya igwe ugbo mmiri?
Naanị ọkara elekere nke ịgba ịnyịnya ígwènwere ikeenyere gị aka igba ọtụtụ narị calorie, dabere na ogo mbọ gị. Gịnwere ike imena n'ụtụtụ ma ọ bụ mgbede tupu ma ọ bụ mgbe arụchara ọrụ, ma ọ bụ gịnwere ike ịgba ígwèkameeụfọdụ ozi. Ọ bụghị naanị na ị ga-akpọ calorie ọkụ ma rụọ ọrụ n'ahụ gị, mana ị ga-echekwa na gas, kwa.Ọnwa iri 20, 2016
Nwere ike idalata site n’ịnyịnya igwe eji agba ụgbọ mmiri?
Ndi igwe ugbo mmiri Schwinn dikwa nma?
Schwinn- Otu n'imeBest Cruiser BikeSdị
Isergbọ igwe ugboalazuru oke maka nkasi obi na obi uto, naSchwinnna-eme ka ụfọdụ n'imekacha mma.Isergbọ igwe ugboalanwere obosara obosara iji nwekwuo nkwụsi ike, nke na-eme ka ha nwee ntụsara ahụ ma sie ike maka ụzọ ndị a kwụrụ apị na ọbụna ụsọ oké osimiri n'akụkụ ájá.Abali 21, 2017
Ndi igwe ochie Schwinn bara uru?
Ọnụahịa dịgasị iche iche, dabere na ọnọdụ, afọ, ụkọ, na ọchịchọ nke ihe nlereanya ahụ. Dị ka ihe atụ, a Devid agụghị ndị gbaraSchwinnIkuku nke nkụghachi ga-ere ihe dị ka $ 70. N'aka nke ọzọ, 1920sSchwinnExcelsior na agba mbụ nwere ike ire ahịa maka $ 900.
Kedu ụgbọ igwe ụgbọ mmiri kacha mma ịzụta?
Thgbọ ịnyịnya nke nwanyị nke isii na-agagharị n'ụgbọ mmiri nke ụmụ nwanyị nke isii bụ ndị kacha mma igwe kwụ otu ebe na gburugburu, na ụlọ ahịa ma ọ bụ n'ịntanetị. Gbanye igwe kwụ otu ebe nke isii nke ọdụ ụgbọ mmiri gị na ihe ọma ị chọrọ. Gbapụta na nkata mara mma, kwadebe igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ azụ ma ọ bụ wụnye mgbịrịgba na igwe gị.
Kedu ihe na-eme igwe kwụ otu ebe n'ụsọ osimiri?
Ọdịdị avehetics na ọcha na-acha ọcha na-eme ka obodo mepere emepe n'akụkụ osimiri ma ọ bụ mkpagharị ọ bụla. Ewubere site na tubing nchara ígwè, etiti ahụ nwere ihe eji emegharị anya, na-agbakwunye ya. Ihe abụọ ndị a na-arụ ọrụ na nkasi obi nke ụgbọ mmiri a.
Kedu mgbe mbụ emebere igwe eji agba agba mmiri?
N’ịchọgharị ihe ọ na-eme, ụlọ ọrụ Schwinn wepụtara “Schwinn Cruiser” ọsọ ọsọ na 1977, soro ya n’ụlọ ikpe wee kpezie ya na McNeely. Otherlọ ọrụ ndị ọzọ, dị ka Huffy, wụkwasịrị ụgbọ mmiri wee rie ebili mmiri ahụ. A ka na-eme nsụgharị ụfọdụ nke ụdị ndị mbụ.